Akwukwo ozi nke Blog nke ihe akpadoro ndi India "Art and Culture" - THE INDIAN FACE
Foto ZAK NOYLE Surf
A na-ewere Zak Noyle taa dịka otu n'ime foto kacha mma n'ụwa. Dabere na agwaetiti O'ahu na Hawaii, Zak na-ahụ maka sọfụ na foto
Gba igwe na Chechu Arribas
Nkume ịrị ugwu m bụ otu n'ime usoro mmụta kachasị amasị m na otu n'ime ogologo oge m na-eme dị ka onye na-eme egwuregwu, ya mere ntughari na ịrịgo foto n'ime m bụ usoro ebumpụta ụwa.
Jaime de Diego na usoro nlere anya nke adrenaline ya
Foto m na-adọta uche (ma ọ dịkarịa ala, nke ahụ bụ ihe ha kwuru) maka ọdịiche dị ukwuu, ojiji nke flash na ihe ndị a mụụrụ. Ha bụ isi ihe na - amasị m ka mụ na ya rụọ ọrụ, na echiche m nwere ike ịgbanwe ihe.
Michael Clark: Usoro nka na foto
Michael Clark nwere ọkachamara na egwuregwu egwuregwu, ọdịdị ala ọhịa na njem, na-etinye usoro nlele na teknụzụ dị mkpa iji nweta foto kacha mma. Nkà ya mere ka e bipụta ya n'ime ụwa maka ndị mmadụ n'otu n'otu, ndị na-ebi akwụkwọ, maka nzube mgbasa ozi, n'etiti ndị ọzọ
Chechu Arribas na ọhụụ ya nke Snowboarding
Ebi m n’otu obodo dị na Pyrenees ebe udu mmiri ọ bụla, ana m eji ndidi chere ka ikuku wee pụta iji nwee ọ andụ na arụ ọrụ; M na-agbanwe ọrụ m dị ka Lifeguard Pistero nke dị na Cerler sịnịma ski na dịka onye na - ese foto dị oke egwu.
Enwere m ike ikwu n’atụghị ụjọ na m ga-ezighi ezi na n’oge udu mmiri ana m eme mmemme ụbọchị ubochi ma nke a na-enye m ohere ịrụ ọrụ na nkuzi niile agụnyere n’egwuregwu oyi.
Adrián Otero: skater nke Galician onye wuru okpiri mbu
Adrián Otero: skater skater onye wuru ugboelu nke mbu Adrián Otero bu onye Galikia site na omumu ya na okwukwu na prọfesọ ihe osise site n’aka oru. Ebe ọ bụ na ọ bụ skater, o nwere ihe niile iji bụrụ ọsụ ụzọ.